အပြောင်းအရွှေ့မပိတ်ခင် ဘယ်သူတွေ ဘယ်ကို ပြောင်းကြမလဲ
Transfer Dead Line Day မတိုင်ခင် ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိတဲ့ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့များ
7 Aug 2018 . 3:10 PM
နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက် ပိတ်သိမ်းမယ့်ရက်က တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာခဲ့ပါပြီ။ သြဂုတ်(၉)ရက်မှာ အပြောင်းအရွှေ့ပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်လို့ ဒီနေ့အပါအ၀င် (၃)ရက်လောက်သာ ကျန်ပါတော့တယ်။ တချို့ကလပ်တွေကလည်း ရာသီသစ်မှာ အောင်မြင်ဖို့ ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ယူနေသလို စပါးအသင်းလိုမျိုး ကစားသမားသစ် တစ်ယောက်မှ မခေါ်ရသေးတဲ့အသင်းတွေလည်း ရှိနေတယ်။ အရင်နှစ်တွေတုန်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲဟာ သြဂုတ်(၃၁)ရက်မှ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက် ပိတ်သိမ်းတာဖြစ်ပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ ရာသီသစ် မတိုင်ခင်မှာပဲ ပိတ်သွားမှာပါ။ လက်ကျန်ရက်ပိုင်းအတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိနေတဲ့ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့တွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပစ်ဖို့ဒ် Pickford (အဲဗာတန် မှ ချယ်လ်ဆီး)
အဓိက ဂိုးသမား ကေ်ာတိုအာ Courtois ကို လက်လွှတ်ရဖို့ရှိနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ ကော်တိုအာနေရာ အစားထိုးနိုင်မယ့်သူတစ်ဦးကို ကြိုတင်ရှာဖွေနေပါပြီ။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် လက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ ဂိုးသမား ပစ်ဖို့ဒ်က ချယ်လ်ဆီးအသင်း အလိုရှိနေတဲ့ ကစားသမားစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်နေတယ်။
၀ီလီယံ Willian (ချယ်လ်ဆီး မှ မန်ယူ)
ဒီနွေရာသီဈေးကွက်အတွင်း ၀ီလီယံနဲ့ မန်ယူတို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့က Dead line မတိုင်ခင် ဖြစ်လာမလားလို့ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေကြဆဲပါပဲ။ မော်ရင်ဟို Mourinho ကလည်း ဒီနွေရာသီမှာ နောက်ထပ် ကစားသမားသစ်(၂)ဦး ခေါ်ယူလိုနေတဲ့အပြင် ၀ီလီယံဟာ မော်ရင်ဟို အကြိုက်ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်နေတာကြောင့် ၀ီလီယံ-မန်ယူ Transfer Saga က အဆုံးသတ်သွားမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။
ဇာဟာ Zaha (ပဲလေ့စ် မှ ချယ်လ်ဆီး)
ယော်ဂျင်ဟို Jorginho အပြီး ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့ ဒုတိယမြောက် ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်အသင်းအကြား ပြောင်းရွှေ့ကြေး ညှိနှိုင်းလို့ရရင် Dead Line Day မတိုင်ခင်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါပြီ။
အယ်လ်ဒါဝီယဲလ် Alderweireld (စပါး မှ မန်ယူ)
မန်ယူပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်နေတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုပါ။ အခုအချိန်မှာ အယ်လ်ဒါဝီယဲလ်နဲ့ မန်ယူ သတင်းတွေက အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်နေပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာက မကြာခင်အဖြေပေါ်ဖို့ရှိနေတယ်။
အူစမန်ဒမ်ဘီလီ Ousmane Dembele (ဘာစီလိုနာ မှ အာဆင်နယ်)
အူစမန်ဒမ်ဘီလီနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ရဲ့ သတင်းတွေက အရင်ရက်တွေမှာ Gossip အဆင့်သာ ရှိခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပြီ။ ဘာစီလိုနာအသင်းကို မဲလ်ကွန် Malcom ရောက်ရှိလာတာကြောင့် အူစမန်ဒမ်ဘီလီ ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ ရုန်းကန်ရမယ့် အနေအထားရှိနေလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ အူစမန်ဒမ်ဘီလီကို လွယ်လွယ်နဲ့ လက်လွှတ်ဖို့ အနေအထားမရှိပါဘူး။
မာစီယဲလ် Martial (မန်ယူ မှ စပါး)
မာစီယဲလ်ကတော့ ဒီနွေရာသီမှာ မန်ယူက ထွက်ခွာဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေပြီ။ အခုအပြောင်းအရွှေ့အတွင်း ကစားသမားသစ် မခေါ်ရသေးတဲ့ စပါးအသင်းအတွက် မာစီယဲလ်က ပထမဆုံးခေါ်ယူတဲ့ ကစားသမားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ. .ဒါတွေကတော့ ဒီနွေရာသီဈေးကွက်မပိတ်ခင် အပြောင်းအရွှေ့ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိနေတဲ့ ကစားသမားတွေပါပဲ။ ဘယ်ကစားသမားက ဘယ်အသင်းကို ရောက်သွားမလဲဆိုတာကတော့ . . .
Photo:Pinterest,Evening Standard,Globo Esporte,The Independent
Transfer Dead Line Day မတိုငျခငျ ဖွဈပျေါလာဖို့ရှိတဲ့ ကစားသမားအပွောငျးအရှမြေ့ား
နှရောသီအပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျ ပိတျသိမျးမယျ့ရကျက တဖွညျးဖွညျးနီးကပျလာခဲ့ပါပွီ။ သွဂုတျ(၉)ရကျမှာ အပွောငျးအရှပေိ့တျသိမျးမှာဖွဈလို့ ဒီနအေ့ပါအဝငျ (၃)ရကျလောကျသာ ကနျြပါတော့တယျ။ တခြို့ကလပျတှကေလညျး ရာသီသဈမှာ အောငျမွငျဖို့ ကစားသမားသဈတှေ ချေါယူနသေလို စပါးအသငျးလိုမြိုး ကစားသမားသဈ တဈယောကျမှ မချေါရသေးတဲ့အသငျးတှလေညျး ရှိနတေယျ။ အရငျနှဈတှတေုနျးက ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲဟာ သွဂုတျ(၃၁)ရကျမှ အပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျ ပိတျသိမျးတာဖွဈပမေယျ့ ဒီနှဈမှာတော့ ရာသီသဈ မတိုငျခငျမှာပဲ ပိတျသှားမှာပါ။ လကျကနျြရကျပိုငျးအတှငျး ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဖွဈပျေါလာဖို့ရှိနတေဲ့ ကစားသမားအပွောငျးအရှတှေ့ကေို ပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ပဈဖို့ဒျ Pickford (အဲဗာတနျ မှ ခယျြလျဆီး)
အဓိက ဂိုးသမား ကျောတိုအာ Courtois ကို လကျလှတျရဖို့ရှိနတေဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးအနနေဲ့ ကျောတိုအာနရော အစားထိုးနိုငျမယျ့သူတဈဦးကို ကွိုတငျရှာဖှနေပေါပွီ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ အင်ျဂလနျအသငျးအတှကျ လကျစှမျးပွခဲ့တဲ့ ဂိုးသမား ပဈဖို့ဒျက ခယျြလျဆီးအသငျး အလိုရှိနတေဲ့ ကစားသမားစာရငျးမှာ ထိပျဆုံးက ပါဝငျနတေယျ။
ဝီလီယံ Willian (ခယျြလျဆီး မှ မနျယူ)
ဒီနှရောသီဈေးကှကျအတှငျး ဝီလီယံနဲ့ မနျယူတို့ရဲ့ အပွောငျးအရှကေ့ Dead line မတိုငျခငျ ဖွဈလာမလားလို့ ပရိသတျတှေ စိတျဝငျစားနကွေဆဲပါပဲ။ မျောရငျဟို Mourinho ကလညျး ဒီနှရောသီမှာ နောကျထပျ ကစားသမားသဈ(၂)ဦး ချေါယူလိုနတေဲ့အပွငျ ဝီလီယံဟာ မျောရငျဟို အကွိုကျကစားသမားတဈဦး ဖွဈနတောကွောငျ့ ဝီလီယံ-မနျယူ Transfer Saga က အဆုံးသတျသှားမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။
ဇာဟာ Zaha (ပဲလစျေ့ မှ ခယျြလျဆီး)
ယျောဂငျြဟို Jorginho အပွီး ခယျြလျဆီးအသငျးကို ရောကျရှိလာနိုငျတဲ့ ဒုတိယမွောကျ ကစားသမားဖွဈပါတယျ။ နှဈအသငျးအကွား ပွောငျးရှကွေ့ေး ညှိနှိုငျးလို့ရရငျ Dead Line Day မတိုငျခငျဖွဈလာဖို့ရှိနပေါပွီ။
အယျလျဒါဝီယဲလျ Alderweireld (စပါး မှ မနျယူ)
မနျယူပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့နတေဲ့ အပွောငျးအရှတေ့ဈခုပါ။ အခုအခြိနျမှာ အယျလျဒါဝီယဲလျနဲ့ မနျယူ သတငျးတှကေ အမြိုးမြိုး ထှကျပျေါနပွေီး ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာက မကွာခငျအဖွပေျေါဖို့ရှိနတေယျ။
အူစမနျဒမျဘီလီ Ousmane Dembele (ဘာစီလိုနာ မှ အာဆငျနယျ)
အူစမနျဒမျဘီလီနဲ့ အာဆငျနယျတို့ရဲ့ သတငျးတှကေ အရငျရကျတှမှော Gossip အဆငျ့သာ ရှိခဲ့ပမေယျ့ အခုတော့ ဖွဈနိုငျခွရှေိတဲ့အဆငျ့ကို ရောကျရှိနပွေီ။ ဘာစီလိုနာအသငျးကို မဲလျကှနျ Malcom ရောကျရှိလာတာကွောငျ့ အူစမနျဒမျဘီလီ ပှဲထှကျခှငျ့ရဖို့ ရုနျးကနျရမယျ့ အနအေထားရှိနလေို့ပါ။ ဒါပမေဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးကတော့ အူစမနျဒမျဘီလီကို လှယျလှယျနဲ့ လကျလှတျဖို့ အနအေထားမရှိပါဘူး။
မာစီယဲလျ Martial (မနျယူ မှ စပါး)
မာစီယဲလျကတော့ ဒီနှရောသီမှာ မနျယူက ထှကျခှာဖို့ သခြောသလောကျရှိနပွေီ။ အခုအပွောငျးအရှအေ့တှငျး ကစားသမားသဈ မချေါရသေးတဲ့ စပါးအသငျးအတှကျ မာစီယဲလျက ပထမဆုံးချေါယူတဲ့ ကစားသမားဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ. .ဒါတှကေတော့ ဒီနှရောသီဈေးကှကျမပိတျခငျ အပွောငျးအရှေ့ ဖွဈပျေါလာဖို့ရှိနတေဲ့ ကစားသမားတှပေါပဲ။ ဘယျကစားသမားက ဘယျအသငျးကို ရောကျသှားမလဲဆိုတာကတော့ . . .